Muhiimadda Kitaabka Quduuska ah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Qorniinku waa Erayga Eebbe ee la waxyooday, qoraalka aaminka ah ee Injiilka, iyo muujinta runta ah ee saxda ah ee muujinta Ilaah ee dadka. Marka tan la eego,, Kitaabka Quduuska ah waa mid aan macquul ahayn oo aasaasi u ah Kaniisadda dhammaan arrimaha la xiriira barashada iyo nolosha » (2 Timoteyos 3,15:17 - 2; 1,20 Butros 21: 17,17; Yooxanaa).
Qoraa warqad u ah Cibraaniyada ayaa sheegaya waxa soo socda ee ku saabsan sida Ilaah uga hadlay qarniyadii jiritaanka aadanaha: "Ka dib markii Ilaah la hadlay awowayaasheen nebiyadii, marar badan iyo siyaabo badan, ayuu nagula hadlay maalmihii ugu dambeeyay. iyada oo loo marayo wiilka " (Cibraaniyada 1,1: 2).
Fikradda ah "siyaabo badan iyo qaabab badan" waa muhiim. Erayga qoran marwalba lama heli karo, oo waqti ka waqti Ilaah wuxuu fikradihiisa u muujiyaa awoweyaasha sida Ibraahim, Nuux, iwm dhacdooyinka cajiibka ah Bilowgii 1 ayaa shaaca ka qaaday qaar badan oo kuwan kullamada hore ee u dhexeeya Ilaah iyo aadanaha .. Markii wakhtigu sii socday, Ilaah wuxuu adeegsaday habab kala duwan si uu u helo dareenka aadanaha (sida duurka gubanaya ee Baxniintii 2: 3,2) oo wuxuu u diray farriin sida Muuse, Yashuuca, Debora, iwm si ay eraygiisa dadka ugu sheegaan.
Waxay u muuqataa in sida Qorniinku soo ifbaxay, Ilaah wuxuu bilaabay inuu adeegsado dhexdhexaadinkan si uu farriintiisa noogu hayo farcan dambe, oo ku dhiirrigeliya nebiyada iyo macallimiinta inay qoraan wuxuu doonayo inuu ku dhaho aadanaha.
Si ka duwan buugaagta badan ee diimaha kale ee caanka ah, aruurinta buugaagta loogu magac daray "Axdiga Hore", oo ka kooban buugaagta pre-Masiix, waxay si joogto ah u sheegataa inay tahay Ereyga Ilaah. Yeremyaah 1,9: 1,3.6.9; Amos 11, 13, 1,1,; iyo; Miikaah iyo qaybo kale oo badan ayaa muujinaya in nebiyadu fahmeen fariimahooda duuban sida haddii Ilaah qudhiisu hadlayo, oo sidan ayay dadku "Ruuxa Quduuska ah ugu dhex wado magaca Ilaah" hadlay " (2 Butros 1,21). Bawlos wuxuu Axdigii Hore ugu yeedhay "buugaagta" kuwaas oo "lagu waxyooday" (2 Timoteyos 3,15: 16).
Fikraddan dhiirigelinta ah waxaa qaatay qoraayaasha Axdiga Cusub. Axdiga Cusubi waa buugaag la soo ururiyey oo markii hore lala xidhiidhay kuwii loo aqoonsaday inay yihiin rasuullo kahor [wakhtigii Falimaha Rasuullada 15], sheeganayana sida Qorniinku leeyahay. Xusuusnow in rasuul Butros uu u kala saaray waraaqaha Bawlos “iyada oo loo eegayo xikmadda la siiyay” iyada oo la raacayo “Qorniinka kale” (2 Butros 3,15: 16). Dhimashadii rasuulladii hore, wax buug ah oo la qoray oo markii dambe la aqbali waayey qayb ka mid ah waxa aan hadda ugu yeedhnay Kitaabka Quduuska ah.
Rasuulladii sida Yooxanaa iyo Butros, oo la socday Masiixa, waxay diiwaangelinayeen qodobbada sarsare ee shaqadii Ciise iyo waxbaridda annaga (1 Yooxanaa 1,1: 4-21,24.25; Yooxanaa). Waxay "arkeen sharaftiisa naftooda" oo "ereyga nebiyadu sii adkaysteen", oo waxay ku dhawaaqeen "xoogga iyo imaatinka Rabbigeenna Ciise Masiix" (2 Butros 1,16: 19). Lukas, oo ah dhakhtar iyo qof loo aqoonsan yahay taariikhyahan, waxay ka aruuriyeen sheekooyin "markhaatiyaasha iyo adeegaha erayga" waxayna qoreen "warbixin habsami leh" si aan "u baran karno goobta aaminka ah ee waxbarista ee laygu baray" (Luukos 1,1-4).
Ciise wuxuu yidhi Ruuxa Quduuska ah wuxuu xusuusiyey rasuulladii wixii uu yidhi (Yooxanaa 14,26). Sida uu u waxyooday qorayaasha Axdiga Hore, Ruuxa Quduuska ah wuxuu ku dhiirigelinayaa rasuullada inay qoraan buugaagtooda iyo Qorniinka anaga, isaguna wuxuu ku hanuunin lahaa runta oo dhan. (Yooxanaa 15,26: 16,13). Annaga ahaan, Qorniinku wuxuu markhaati aamin ah u yahay injiilka Ciise Masiix.
Qorniinku waa erayga loo waxyooday Eebbe
Sidaa darteed, sheegashada Baybalka ee ah in Qorniinku yahay Erayga Eebbe ee waxyiga ah waa run oo diiwaansan sax ah oo muujinta Ilaah ee aadanaha. Waxay la hadashaa amarka Eebbe. Waxaan arki karnaa in Kitaabka Quduuska ahi u qaybsan yahay laba qaybood: Axdigii Hore, kaasoo, sida warqaddii Cibraaniyadu tidhaahdo, ay muujinayso wixii Ilaah ku yidhi nebiyadii; iyo weliba Axdiga Cusubi, oo mar labaad shaaca ka qaaday iyada oo tixraacaysa Cibraaniyada 1,1: 2 wixii Ilaah innaga siiyay Wiilkiisa ayaa hadlay (iyada oo loo marayo Qorniinka rasuullada). Sidaa darteed, sida ku xusan Qorniinka, xubnaha reerka Eebbe waxay ku 'dhisan yihiin aasaaska rasuullada iyo nebiyadii oo la leh Ciise laftiisu (Efesos 2,19: 20).
Waa maxay qiimaha Qorniinku u leeyahay qofka rumaysta?
Qorniinku wuxuu inoo horseedaa badbaadada rumaysadka xagga Ciise Masiix. Axdiyada Hore iyo Axdiga Cusub labaduba waxay sharraxaan qiimaha Qorniinka ee rumaystaha. Sabuurka ayaa ku dhawaaqay "Ereygaagu waa nuurka cagtayga, Oo jidkaygana iftiin." (Sabuurradii 119,105). Laakiin qaabkee ayuu ereygu tilmaamayaa? Tani waxa qaatay Bawlos markii uu u qorayay wacdiyihii Timoteyos. Aynu fiiro gaar ah u yeelanno wuxuu ku yiri 2 Timoteyos 3,15 (daabacay saddex tarjumaadood oo kala duwan oo Baybalka) ayaa leh:
"... waad taqaanaa Qorniinka [Quduuska ah] ee ku bari kara inaad ku badbaado iimaanka xagga Ciise Masiix" (Luther 1984).
"... ogaada buugaagta kaa dhigi kara kuwa caqliga leh inaad badbaadada ku hesho iimaanka xagga Ciise Masiix" (Tarjumaadda Schlachter).
Intaa waxaa sii dheer, waad bartay Qorniinka ilaa caruurnimadiisii. Waxay ku tusineysaa sida keliya ee lagu badbaadiyo, aaminaadda Ciise Masiix " Qof kasta rajo u qabo.
Qoraalkan muhiimka ah wuxuu xoojinayaa in Qorniinku innaga ina keenayo badbaadada xagga rumaysadka Masiixa. Ciise laftiisu wuxuu sharraxay in Qorniinku u marag furay isaga. Markaasuu ku yidhi, Wax alla wixii igu qornaa waa inay ku rumaystaan ​​sharciga Muuse, iyo nebiyadii, iyo sabuurradii (Luukos 24,44). Qorniinkaani waxay tilmaamayaan Masiixa inuu yahay Masiixa. Isla cutubka, Luukos wuxuu sheegayaa in Ciise la kulmay laba xer ah intii uu ku safrayay tuulo la yiraahdo Emmaus, "iyo in uu ku bilaabay Muuse iyo nebiyada oo dhan oo uu tarjumay wixii isaga ku saabsan oo dhan Qorniinka" (Luukos 24,27).
Qayb kale, markii ay silcin jireen Yuhuudda, oo rumeysan in ilaalinta sharciga ay tahay jidka nolosha weligeed ah, wuxuu ku saxday isagoo leh, "Waxaad eegaysaa Qorniinka maxaa yeelay waxaad moodaa inaad adigu leedahay nolosha weligeed ah; Oo iyana waa aniga markay ii marag furayso; laakiin ma dooneysid inaad ii timaado inaad nolosha leedahay " (Yooxanaa 5,39-40).
Qorniinku sidoo kale wuu ina daahiriyaa oo qalabeeyayaa
Qorniinku wuxuu inoogu hogaamiyaa badbaadada xagga Masiixa, iyo shaqada Ruuxa Quduuska ah waxaa nalooga dhigay quduusnaanta Qorniinka (Yooxanaa 17,17). Nolosha sida waafaqsan runta ah ee Qorniinka Quduuska ah ayaa ina kala sooca.
Bawlos wuxuu sii sharaxay 2 Timoteyos 3,16: 17:
"Waayo, Qorniin kasta oo Ilaah soo galay, wuxuu waxtar u leeyahay waxbaridda, canaanashada, iyo hagaajinta, iyo aqoonta xaqnimada ee ninka Ilaah u qumman yahay, iyo wanaag oo dhan."
Qorniinka, oo noo tilmaamaya Masiixa badbaadada, waxay sidoo kale ina barayaan waxbarista Masiixa si aan ugu korayno muuqaalkiisa. 2. Yooxanaa 9 wuxuu caddeeyaa in "ku alla kii dhaafa oo ku sii jira cilmiga Masiixa Ilaah ma leh," Bawlosna wuxuu ku adkaystay inaan ku raacno "ereyada bogsashada" ee Ciise Masiix (1 Timoteyos 6,3). Ciise wuxuu ku adkeeyey in rumaystayaasha adeeca hadalkiisa ay la mid yihiin ragga caqliga leh ee guryahooda dhagax ka dul dhisay (Matayos 7,24).
Sidaa darteed, Qorniinku maahan mid ina caqli galinaya badbaadada, laakiin wuxuu u hoggaamiyaa rumaystaha qaan gaadhnimada iyo inuu isaga / iyada ugu diyaariyo shaqada injiilka. Baybalku waxyaalahan oo dhan kuma sameeyo ballanqaadyo madhan. Qorniinka Quduuska ah waa mid aan la isku hallayn karin oo aasaas u ah Kaniisadda dhammaan arrimaha la xiriira caqiidada iyo nolosha rabbaaniga ah.
Barashada Baybalka - edbinta masiixiga
Barashada Kitaabka Quduuska ahi waa edbinta aasaasiga ah ee Masiixiyiinta oo si wanaagsan loogu metelay xisaabaadka Axdiga Cusub. Kuwa xaqa ah ee Beeraha ah "waxay aqbaleen ereyga oo waxay baadheen Qorniinka maalin kasta in tani ay sidaas ahayd" si loo xaqiijiyo waxay rumeysan yihiin Masiixa (Falimaha Rasuullada 17,11). Khasnajigii boqoradda Kandake ee Itoobiya wuxuu akhriyey Ishacyaah markii Filibos ku wacdiyey Ciise (Falimaha Rasuullada 8,26: 39). Timoteyos, oo ku yaqaan Qorniinka tan iyo carruurnimadaada rumaysadka hooyadiis iyo ayeeyadiis (2 Timoteyos 1,5: 3,15;) ayaa Paul xusuusiyay inuu si sax ah u qaybiyo ereyga runta (2 Timoteyos 2,15), iyo "ereyga wacdi" (2 Timoteyos 4,2).
Warqadda loo diray Tiitos wuxuu farayaa in oday kastaa "adeeco ereyga runta oo hubaal ah" (Tiitos 1,9). Bawlos wuxuu xasuusinayaa Roomaanka in "waxaan ku rajo qabnaa adkeysi iyo raaxada Qorniinka" (Rooma 15,4).
Baybalku wuxuu sidoo kale nooga digayaa inaynaan ku tiirsanayn fasiraaddayada u gaarka ah qaybaha kitaabiga ah (2 Butros 1,20) si aan ugujawaabno Qorniinka xukunkeena (2 Butros 3,16), oo ka dood dooda iyo halganka macnaha ereyada iyo diiwaannada lamaanaha (Tiitos 3,9; 2 Timoteyos 2,14.23,). Ereyga Eebbe kuma xidhna fikirradeenna hore u soo nooleeyay iyo marin-habaabinta (2 Timoteyos 2,9), waa halkii "nool oo xoog leh" oo "ah mid xukumi kara fikirka iyo dareennada qalbiga" (Cibraaniyada 4,12).
Baybalku wuxuu khuseeyaa Masiixiyiinta maxaa yeelay. , ,
waa erayga loo waxyooday Eebbe.
rumaysadka ayuu Masiixa u horseedaa badbaadada.
waxay quduus ka dhigaysaa qofka rumaysta ah shaqada Ruuxa Quduuska ah.
waxay u horseedaysaa qofka rumaysta inuu qaan gaadho.
waxay rumaystayaasha ku xoojisaa shaqada injiilka.